आइफोनको कमजोरी पत्ता लगाउनुहोस् ११ करोड रुपयाँ पुरस्कार जित्नुहोस् ! – ताजा समाचार
आइफोनको कमजोरी पत्ता लगाउनुहोस् ११ करोड रुपयाँ पुरस्कार जित्नुहोस् !
एजेन्सी। चर्चित मोबाइल फोन उत्पादक कम्पनि एप्पलले आफुले उत्पादन गरेको आइफोनमा खराबी पत्ता लगाउनेलाई दशलाख अमेरिकी डलर अर्थात् ११ करोड ३० लाख नेपाली रुपयाँको पुरस्कार घोषणा गरेको छ । उसले त्यो रकम साइबर सेक्युरिटी रिसर्चको नाममा छुट्याएको हो ।